Fantatrao ve: Ahoana no hikajiana ny vidin'ny solika?
lundi, 13 mai 2019 09:24
Eto Madagasikara dia ny Fanjakana, rehefa avy midinika amin'ireo mpanafatra sy mpaninjara solika, no mametra ny vidin'ny solika farany ambony.
Raha teo aloha, ny sehatry ny stratejika toy ny solika dia ny fanjakana iray manontolo no manafatra, manadio, ary mitsinjara, dia taty aoriana namidy sy nomena ny tsy miankina avokoa izany.
Ny Station service dia Malagasy no betsaka mitana azy, misy petra-bola omeny ny mpanijara ambongadiny, dia iny mpanijara iny no miantoka ny station, ny fitaovana rehetra, ny solika amidy ao. Ilay Gérant station izany no miantoka ny lany rehetra, na ny mpiasa, na ny fampendehanana ny varotra, ny jiro, rano sy ny kojakoja ilaina.
Mahazo mivarotra entana hafa izy fa voafetra ihany koa izany, fa tsy maintsy maka izay entan'ilay mpaninjara ambongadiny, toy ny menaka fiara...
Singa 5 lehibe no tafiditra amin'ny famaritana ny vidin'ny solika amidy antsinjarany amin'ny mpanjifa:
- Ny vidin'ny solika iraisam-pirenena;
- Ny Saran-dalana itaterana ny solika tonga eo amin'ny sisitanin'ny Madagasikara;
- Ny lanjam-bola malagasy (taux de change);
- Ny vola lanin'ny mpaninjara sy ny ny tombom-barotra ho azy (izy no manome ny station);
- Ny Hetram-panjakana alaina amin'ny vidin'ny solika.
Raha raisintsika ny vidin'ny solika, izay ny 04 desambra 2018 no namaritana azy farany, izay hita eny amin'ny station ankehitriny dia:
1- Lasantsy (Super Carburant - SC) (Ariary/litatra):
- Vidin'ny solika: 2 111 (50% ny vidiny amarotana azy)
- Fitaterana sy fitehirizana: 358 (9%)
- Mpaninjara: 515 (12%)
- Hetram-panjakana: 1 511 (36%)
Totaliny: 4 495 ariary/litatra
Amarotana azy: 4 200 ariary
Fatiantoka, izay ny mpaninjara no miantoka azy: 295 ariary/litatra
2- Solika fandrehatra (Pétrole Lampant - PL) (Ariary/litatra):
- Vidin'ny solika: 2 370 (90% ny vidiny amarotana azy)
- Fitaterana sy fitehirizana: 344 (13%)
- Mpaninjara: 515 (20%)
- Hetram-panjakana: 20 (1%)
Totaliny: 3 249 ariary/litatra
Amarotana azy: 2 630 ariary
Fatiantoka, izay ny mpaninjara no miantoka azy: 619 ariary/litatra
3- Gazoaly (Gasoil - GO) (Ariary/litatra):
- Vidin'ny solika: 2 412 (68% ny vidiny amarotana azy)
- Fitaterana sy fitehirizana: 339 (10%)
- Mpaninjara: 515 (15%)
- Hetram-panjakana: 968 (27%)
Totaliny: 4 234 ariary/litatra
Amarotana azy: 3 550 ariary
Fatiantoka, izay ny mpaninjara no miantoka azy: 684 ariary/litatra
Salanisa: Raha kajiana amin'ny fitambarany ankabobeny tsy misy fanavahana izany ny solika dia toy izao ny kajy
- Vidin'ny solika: 2 326 (63% ny vidiny amarotana azy)
- Fitaterana sy fitehirizana: 344 (9%)
- Mpaninjara: 515 (14%)
- Hetram-panjakana: 1 060 (29%)
Totaliny: 4 245 ariary/litatra
Amarotana azy: 3 674 ariary
Fatiantoka, izay ny mpaninjara no miantoka azy: 571 ariary/litatra
Amin'ny ankapobeny ny Gérant station dia omen'ny Mpaninjara ampahany amin'ny azony, dia eo amin'ny 60 ariary/litatra amin'ny solika rehetra, izany hoe 1.63% amin'ny vidin'ny solika amidiny.
Raha zohina izany dia mikirakira volan'olona fotsiny ny gérant station.
Ny fanjakana izany no tena mahazo amin'ny vidin'ny solika, satria vao manao lasantsy 1litatra amin'ny moto nao na ny fiaranao ianao, ka mamoaka vola 4 200 ariary, dia ny 1 511ariary (36%) amin'iny dia an'ny fanjakana.
515 ariary tsy miova ny an'ny mpaninjara, izay izy no miantsoroka ny fatiantoka satria amidy ambanin'ny vidiny ny solika. Izay no mahatonga ny Mpanijara angataka ny vérité de prix, na ny hoe izay tena vidiny no amarotana azy.
Ny fanjakana kosa tsy manaiky izay satria anaratsy ny ara-tsosialy izay, no hisy fiatraikany amin'ny vidin'entana sy ny toe-karena, ka dia mihavosa hatrany, izay efa amina miliara izao ny trosan'ny Mpaninjara amin'ny fanjakana, ankoatran'ny vola vidi-tsolika amina miliara maro alain'ny Jirama nefa tsy voaloa.
Ny resaka hetra dia mamaritra ny fironan'ny toe-karena, eto izany dia ny famporisihana ny olona ampiasa pétrole no ataon'ny fanjakana satria zara raha maka hetra amin'io izy, na koa azo jerana amin'ny lafiny iray hoe, ireo tsy manana jiro no tena mampiasa ny pétrole, indrindra fa ny any ambanivohitra, dia mitsinjo an'izay izy.
Raha jerena kosa ny fatiantoka amin'ny Gazoala, dia hita fa manosika ny fampiasana ny gazoala ny fanjakana, mety hampihena ny sarany amin'ny fiara fitaterana izay, satria mandeha gazoala no betsaka, fa raha zohiana amin'ny politikan'ny fiarovana ny tontolo iainana, izay ny gazoala no anisany mandoto amin'izany, dia aleon'ny fanjakana maloto ny tontolo iainana toy izay anosika ny mpampiasa fiara hiditra amin'ny fampiasana solika na karazana fiara tsy mandoto firy.
Mety azo jerena ihany koa anefa ny hoe, tsy misy politika mifehy ny fampidirana ny mpisehatra ara-toekarena amin'ny ara-dalàna (formel), dia izay efa mpandoa hetra ihany aloha no tataovana, ka mora ny mitaky hetra amin'ireo mpaninjara solika, toy izay hametraka politika fanangonana hetra ho an'ny rehetra.
Marihina fa 11% n'ny Malagasy ihany no mandoa hetra.
Ny 89% izany dia miliba mampiasa ny fotodrafitrasam-panjakana, sy ny raharaham-panjakana, ny fiarovana ny fandriam-pahalemana sy ny fampianarana ary ny fitsaboana nefa tsy misy mandray anjara amin'izany hetram-panjakana izany.
Io 11% n'ny fampidiram-bola io no hananantsika 5 000 miliara ariary tetibolam-panjakana isan-taona hampandehanana ny fiainam-pirenena.